Accueil > Gazetin'ny nosy > Antaninarenina : Tsenan’andevo lehibe indrindra teto Madagasikara
Antaninarenina : Tsenan’andevo lehibe indrindra teto Madagasikara
Ny tantara tsy mba fanadino, ary tsy maintsy mianga amin’ny tantara ny fandrosoan’ny firenena iray.
Noho izany dia tsara ihany no ahafantarana ny tantara mba hahafahana mandroso.
Koa satria isan’ny toerana lehibe eto Antananarivo sy malaza izany Antaninarenina izany dia tsara raha mba averina ihany ny sombin-tantara mahakasika azy io.
Tamin’ny andron’Andrianampoinimerina dia isan’ny niroborobo be ny fanondranana andevo teto Madagasikara. Nitohy tamin’ny andron-dRadama Voalohany izany, ary mbola notohizin-dRanavalona Voalohany koa. Tsy ny teto Imerina ihany nefa no nahitana izany fa ny faritra maro teto Madagasikara ka ireo mpanjaka sy ny tandapa tamin’ireny toerana ireny no isan’ny mpivarotra andevo lehibe. Niavaka tamin’izany koa ny fanjakana Sakalava tao Menabe sy Boina.
Mahakasika an’Antaninarenina izay horesahintsika androany dia ity toerana ity no tsenan’andevo lehibe indrindra teto Madagasikara tamin’ny andron’ireo mpanjaka voalaza eo ambony ireo. Namidy toa ny entam-barotra tanteraka ny olona tamin’izany fotoana izany. Toa ireny biby ireny no nahazo azy satria raha tsy mifatotra “gadra vy” ny tongony dia any amin’ny tendany no asina izany.
Tsy Antaninarenina ihany nefa no tsenan’andevo teto Imerina fa tao Anjoma tao Analakely koa. Ireo no foiben’ny fivarotana olona teto afovoan-tany. Natao takalo akanjo sy lamba, vanja sy basy ary entam-barotra avy any Erôpa ireo andevo ireo tamin’izany na namidy tamin’ireo mpijirika olona vahiny sy Malagasy tompon-tany ireo olona ireo. Ny andevo sasany moa dia namidy noho ny fanompoana teto Imerina fotsiny ihany. Ny ¾ ny mponina teto Imerina no voalaza fa andevo tamin’izany fotoana izany.
Isan’ny nampatanjaka ny fanjakan’Andrianampoinimerina sy Radama Voalohany ity fivarotana andevo ity.
Mahakasika ny tsena izay, dia tsara koa no mahafantatra fa ny tsenan’Anjoma voalohany dia teo Andohalo no nisy azy. Tsy nisy fivarotana andevo loatra ity toerana ity fa natao hifanakalozana entam-barotra tsotra ihany.
Mahakasika izay fivarotana olona teto Madagasikara tamin’ny andron’Andrianampoinimerina sy Radama Voalohany izay dia isan’ny tsena lehibe tamin’izany koa ny tao Moramanga, Antanamakoa ao Toamasina ary ny Nosy Sainte Marie.